Maitiro Ekunyora Zvemukati Iko Vashanyi Vanosarudza Kukosha Kwako | Martech Zone
Zvisinei mutengo, kukosha kunogara kuchisarudzika nemutengi. Uye kazhinji, kukosha ikoko kunoenderana nekuti mutengi anoregedza sei chigadzirwa chako kana sevhisi. Mazhinji software kana sevhisi (SaaS) vatengesi vanoshandisa kukosha-based kutengesa kuona yavo mutengo. Ndokunge, panzvimbo pekutengesa mutengo wakatarwa pamwedzi kana chiyero chinoenderana nekushandiswa, vanoshanda nemutengi kuona kukosha kuchikwirwa kuchikuva uye vochishandira kudzoka kumutengo wakaenzana kune mapato ese ari maviri.
Heino muenzaniso… kushambadzira neemail. Ini ndinogona kusaina kune imwechete email kushambadzira sevhisi ye $ 75 pamwedzi kana kuenda neyekutanga sevhisi ye $ 500 pamwedzi. Kana ini ndikasasimudzira email uye shandisa iyo kusimudzira, kuwana kana kuchengetedza vatengi, $ 75 pamwedzi haina kukosha uye inogona kunge iri zvakanyanya mari yekushandisa. Dai ndakaenda ne $ 500 pamwedzi sevhisi uye ivo vakabatsira kusimudzira mameseji angu, vakandibatsira kuita mishandirapamwe yeupsell, kutenga uye kuchengetedza ... Iko kukosha kukuru uye kwakaringana mari dzakabhadharwa.
Pane chikonzero nei vashambadziri shandisa zvikamu mumharidzo yavo kupa humbowo hwekuwedzera kukosha kwezvigadzirwa nemasevhisi avo. Kana ndikachinjira kune chako chigadzirwa uye chaigona kundichengetera 25% pamari yangu yekubhadhara, semuenzaniso, zvinoreva zviuru zvemadhora kubhizinesi. Asi kana bhizinesi rako richibhadhara mamirioni emadhora emari, kukosha kwechigadzirwa kwakanyanya, kwakakwira bhizinesi rako kupfuura rangu.
Vatengesi vanowanzoita chikanganiso chekutsanangura a ihwohwo hunokosha kukosha iyo inotsanangura kukosha kwekuzviisa pasi zvichienderana nemaonero avo. Izvi zvinogona kutungamira kune mukaha mune zvinotarisirwa pakati peizvo iwe zvaunofunga kukosha kwako uye izvo izvo mutengi anozivisa kukosha kwako kuve. Muenzaniso: Isu tinoshanda nevatengi vazhinji pane yavo Yekutsvaga Injini Kugonesa. Vatengi vane mapuratifomu akasimba, kushambadzira kwekushambadzira uye nekuvandudza mashandiro, uye inogona kuita shanduko dzakakomba kuti dzipindure kune zvido zveinjini dzekutsvaga dzinowana kukosha kusinganzwisisike kubva kumashumiro edu. Vatengi vasingateereri, havaite shanduko, uye vanopokana nezvatinokurudzira kazhinji vanotambura uye havazive kukosha kuzere kwatinogona kupa.
Sezvo iwe paunonyora zvemukati zvekushambadzira, pane nzira dzinobatsira:
Shandisa zvikamu muzvikamu zvako zvekukosha kuitira kuti vashanyi vaite masvomhu uye vatarise kuchengetedza nekuvandudza pane zvirevo zvavo zvemari pane vatengi vako.
Govera mashandisiro ezviitiko, zviitiko zvezviitiko, uye maitiro akanakisa anobatsira vashanyi vako kuona kukosha kwako kusangano ravo.
Ipa zvemukati zvinotaura zvakananga kune chaiwo maindasitiri, mhando dzemakambani, uye vateereri kuitira kuti vashanyi vako vawane fanano pakati pezvako zvemukati nebhizimusi ravo.
Ipa zvipupuriro kubva kune akawanda vatengi, mazita avo uye zvinzvimbo mukambani, kuitira kuti vanoita zvisarudzo vanofananidza iwo mazita uye zvinzvimbo vanogona kuziva navo.
Vamwe vanhu vanotenda kuti kukosha-kwakavakirwa kushambadzira uye kutengesa zvimwe zvinonyengera. Vanotenda kuti munhu wese anofanira kubhadhara mutengo wakafanana. Ndingatopokana zvinopesana. Makambani ane mitengo yakadzika zvisineyi haina nhoroondo kumutengi uye nemabatiro avanogona kuita zvigadzirwa zvako nemasevhisi. Zvakatoipisisa - kushambadzira kunovimbisa kushanya, chinzvimbo, mari, nezvimwe zvinotyisa. Ivo vari pamberi-vakatakurwa, mari-pasi mabatiro kuitira kuti iwe ushandise mari yako uye uende kana iwe ukasawana mhedzisiro yavakavimbisa. Ini zvirinani kuti ndishande nemutengesi akanditeerera, anonzwisisa zviwanikwa zvangu, akaziva zvandinoda, uye akashanda kuti ape mutengo wakasangana nebhajeti yangu uye ukapa kukosha kwandaida
Tags: ukoshikukosha kwesarudzokukosha kutengesakukosha-kwakavakirwa kutengesa